လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးဂျာစီပြည်နယ် အတ္တလန်တစ် စီးတီး (Altantic City, New Jersey) မှာ ကျင်းပမဲ့
အသုံးချ ကိုယ်ခံပညာ တိုက်ခိုက်ရေး လောက ကြေးစားလက်ဝှေ့ပွဲစဉ် အမှတ် R.O.C ( Ring of Combat – 38 ) အတွက် MMA ( Mixed Martial Art ) မက်ဒယ်လ် ဝိတ်တန်းရှင် အင်ဆန် အောင်လ ကို
At 10/19/2012 10:30:00 PM No comments:
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ ဘဝလုံခြုံမှု ရရှိရေး အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် (၁၇) မြို့နယ်မှ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ စုပေါင်းကာ စစ်တွေမြို့ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး ကို အောက်တိုဘာ လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ် သွားမည ဖြစ်ကြောင်း စစ်တွေ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ ထံမှ သိရှိရသည်။
At 10/19/2012 09:51:00 PM No comments:
At 10/19/2012 09:46:00 PM No comments:
At 10/19/2012 09:09:00 PM No comments:
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး လက်ထောက် ၀န်ကြီးနှင့် အမေရိကန်စစ်တပ်မှ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြီး အရပ်သား ထိန်းချုပ်သည့် စစ်တပ်၏ အခန်းကဏ္ဍ အပါအ၀င် အမေရိကန် စစ်တပ် အတွေ့အကြုံများကို ရှင်းလင်း ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိ ကန် သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချယ်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
At 10/19/2012 09:07:00 PM 1 comment:
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ပြည်တွင်း စက်သုံးဆီ ဈေးကွက်အတွက် ဓာတ်ဆီနှင့် ဒီဇယ် စုစုပေါင်း တန်ချိန် ၃၈,ဝဝဝ ကျော် ကို ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများမှ တဆင့် တင်သွင်းရန် ရှိကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တဆင့် သိရှိရသည်။
At 10/19/2012 09:06:00 PM No comments:
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရွှေတိဂုံဘုရားတွင် တည်ထားပူဇော်နိုင် ရန်အတွက် ဉာဏ်တော် ၁၆ ပေရှိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် တဆူကို အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ‘ငြိမ်းချမ်းရေး လက်ဆောင်’ အဖြစ် ပေးပို့ လှူဒါန်းမည်ဟု သိရှိရသည်။
At 10/19/2012 09:04:00 PM No comments:
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံက မြောက်ကိုရီးယားဘက်မှ တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်မှု ဆန်ေ သာ အပြုအမူ အားလုံးကို တုံ့ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တောင်ကိုရီးယား ကာ ကွယ်ေ ရး ဝန်ကြီးက ပြောကြားလိုက်သည်။ ဝန်ကြီး ကင်မ်ကွမ်ဂျင် က သော ကြာေ န့ တွင် မိမိတို့သည် ပြုံယမ်းအခြေစိုက် မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရဘက်မှ ခြိမ်းခြောက်ရန်မူသော အခြေအနေတိုင်းကို တုံ့ပြန်မည်ဟု အတည်ပြုခဲ့ သည်။
At 10/19/2012 08:52:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သံအမတ်ကြီးဒဲရစ်မစ်ချယ်
သည်ရန်ကုန်မြို့ရှိအမေရိကန်သံရုံးတွင် အာက်တိုဘာလ၁၉ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
At 10/19/2012 08:44:00 PM No comments:
ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့ညီညွတ်ရေးအစည်းအဝေးကို ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ ဒက္ခောင်းကျောင်းတွင် (၁၈-၁၀-၂၀၁၂)ရက်နေ့ က အောင်မြင် စွာကျင်းပပြီးစီးသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
At 10/19/2012 06:16:00 PM No comments:
ဘန်ကောက်မြို့မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်ကနေ တဆင့် သွားရောက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၄၂ ယောက်ကို ဒီကနေ့ ဖမ်းမိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
At 10/19/2012 06:15:00 PM No comments:
ရမ်းဗြဲမြို့တွင် လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတရပ်ကို ၂၀.၁၀.၂၀၁၂ ရက် နံနက် ၉း၀၀ နာရီတွင် စုဝေးပြီး OIC အပေါ်ကို သမ္မတကြီး၏ တုန့်ပြန်ချက် အား ထောက်ခံမှု ၊ UN အဖွဲ့နှင့် တွေ့သောအခါ သမ္မတကြီး မှ တောင်းဆိုချက်ကို အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ရန်တို့ ကို တောင်း သွား မည်ဟု သိရှိရပါသည်။
At 10/19/2012 02:53:00 PM No comments:
At 10/19/2012 02:50:00 PM No comments:
အက်ပဲလ်ကုမ္ပဏီသည် အာရှတွင် အကြီးဆုံး လက်လီအရောင်း ဆိုင်ကြီး ဖြစ် သည့် အက်ပဲလ် ဆိုင်သစ် တစ်ဆိုင်ကို တရုတ်နိုင် ငံ ပေကျင်းမြို့၌ အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်သွားရန် စီစဉ်ထားေ
ကြာင်း အဆိုပါကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ဆိုင်သစ်ကြီးသည်
At 10/19/2012 02:38:00 PM No comments:
ပြည်ပကနေ ပြည်တွင်းဖုန်းတွေ ခေါ်ဆိုတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံခြားနံပါတ် မဟုတ်ဘဲ ပြည်တွင်းဂျီအက်စ်အမ်နံပါတ်နဲ့ ဝင်လာရင် အဲသည်ဝင်လာတဲ့ နံပါတ်နဲ့ ဖုန်းတွေကို အရင်က အစဉ်အလာအတိုင်း လိုင်းပိတ်မှာ ဖြစ်တယ် လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန ဆက်သွယ်ရေး သင်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးကျော်စိုးက
At 10/19/2012 02:31:00 PM No comments:
ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ရဲ ဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ က တင်ပြ တဲ. ပါတီဦးဆောင် တာဝန်ယူမည်.သူများ စာရင်း ထွက်လာ ပါပြီလို.သိရပါတယ်။
ပါတီ ဥက္ကဌ အဖြစ်
-သူရဦးေ၇ွှမန်း ( ပါတီ ဥက္ကဌက တာဝန်မထေမ်းဆောင်နိုင်တာကြောင်. ဦးေ၇ွှမန်းက ဥက္ကဌတာဝန်ပူးတွဲ ထမ်းဆောင်ပါမယ်)
At 10/19/2012 01:55:00 PM No comments:
ဆီးရီးယား အစိုးရ လေတပ်၏ ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း လူ(၄၀)ထက် မနည်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဒေသများတွင် ဗုံးကြဲမှုများကြောင့် ကလေးများ အပါအဝင်(၄၃)ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဆီးရီးယား လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများ က ပြောကြား သွားခဲ့သည်။
At 10/19/2012 01:46:00 PM No comments:
သြစတြေးလျ နိုင်ငံက Woodside Petroleum လို့ ခေါ်တဲ့ လောင်စာ ကုမ္ပဏီကြီးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေနံနဲ့ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းတွေ ကို တောင်ကိုရီယား ဒေ၀ူး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးနဲ့ တွဲပြီး လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။
At 10/19/2012 01:36:00 PM No comments:
ကျ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို ယခုနှစ်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ က လေ့လာသူ အဖြစ် ပါ ၀င်ရန် အမေရိကန် က ကမ်းလှမ်းထား သည် ဟု ရိုက်တာ သတင်း ဌာန က သီးသန့် ရရှိ သည့် သတင်း တွင် ဖော်ပြထားသည်။
At 10/19/2012 01:19:00 PM No comments:
မိတ္ထီလာခရိုင်၊ မလှိုင်မြို့နယ်ပိုင်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း မကြီးေ ပါ် ၌ အောက် တိုဘာ ၁၄ ရက် နံနက် ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် ကားမီးလောင်သောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာမှ လာရောက် စစ်ဆေးစဉ် မူးယစ်စိတ်ကြွဆေးထုပ်များကို တောစပ်တွင်ဖွက်ခဲ့၍ ယာဉ်ပေါ်ပါလူများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
At 10/19/2012 12:30:00 PM No comments:
ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီးနှင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးတို့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ချက်အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့် သတင်းမီဒီ ယာများ တွေ့ဆုံမည့် အစီအစဉ် ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲ လိုက်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး က စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်မင်းဆွေထံ လွန်ခဲ့ သော မိနစ်ပိုင်း အတွင်းက အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။
At 10/19/2012 12:16:00 PM No comments:
At 10/19/2012 12:09:00 PM No comments:
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တိဘက်
ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်လားမား တို့ဟာ Forum 2000 အဖွဲ့ရဲ့ နိုင်ငံတကာ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ထဲမှာ ပါဝင်လာကြပြီလို့ Fo
rum 2000 အဖွဲ့က ကြာသပတေးနေ့မှာ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
At 10/19/2012 12:03:00 PM No comments:
At 10/19/2012 11:59:00 AM No comments:
At 10/19/2012 10:19:00 AM No comments:
နန်းခင်ဇေယျာ = ပထမ စရောက်စ ... စစချင်း ဆိုရင် မြန်မာဆိုတာ
ဘာမှန်းေ တာင် ရှိမှန်းမသိဘူး၊ အခုက မြန်မာနိုင်ငံ
At 10/19/2012 10:08:00 AM No comments:
At 10/19/2012 09:46:00 AM No comments:
At 10/19/2012 08:53:00 AM No comments:
ကြောင်း၊အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်ရန် ခေါ်ဈေးေ အာက် လျှော့ ရောင်းနေရကြောင်း မန်းအိမ်ခြံမြေပွဲစားတို့က ဆိုသည်။
At 10/19/2012 08:50:00 AM No comments:
ရွှေမြန်မာမီဒီယာမှ တာဝန်ရှိသူများခင် ဗျာ .. ပြည်သူများအမှန်တစ်ကယ်ခံ
စားနေရသည့် အကျင့်ပျက်ခြစား ၀န်ထမ်း တို့၏ လုပ်ရပ်များကို တာဝန်ရှိသူများသိရှိစေလိုပါသဖြင့် ယခုပို့ပေးသောသတင်းကို ရွှေမြန်မာ မီဒီယာတွင် တင်ပေးစေလိုပါသည်ခင်ဗျား ..
At 10/19/2012 08:44:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ အမေရိကန် ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး William J. Burns ဟာ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ မြန်မာ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အပါအ၀င်မြန်မာအစိုးရပိုင်းက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရော၊
ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်း အဝေးတွေကို မနက်ဖြန် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ပြန် လည် စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတခါ လွှတ်တော် စည်းဝေးပွဲတွေ ကျရင် နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးကြ မှာ ဖြစ် သလို အတည်ပြုထားတဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေပြင်
At 10/19/2012 12:36:00 AM No comments:
ဥပဒေအချို့ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ပယ်ဖျက်
ပထမအကြိမ် လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွေ ပြန် လည်စတင်တဲ့ နေ့မှာပဲ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကနေအတည်ပြု ထား တဲ့ ဥပဒေ ၄ ခု ဖျက်သိမ်းရေး ဥပဒေကြမ်းတွေ ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကလဲ ဖျက်သိမ်းကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါ တယ်။